सप्तरी । सप्तरीमा एक किशोरीको अर्धनग्न शव फेला परेपछि प्रहरीले हत्या आशङ्कामा उनका बुबालाई पक्राउ गरेको छ । बलान बिहुल गाउँपालिका–४ बेल्हीकी १६ वर्षीया सरिताकुमारी बडहीको अर्धनग्न शव चोटपटक लागेको अवस्थामा..
ट्याक्सीमाथि ट्राफिक प्रहरीको ‘हाउ मच’ कारबाही
काठमाडौं । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले विभिन्न बहानामा यात्रु ठगी गर्ने ट्याक्सी चालकमाथिको कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ। महाशाखाले मंगलबारमात्र यात्रुसँग बढी भाडा लिने, मिटरमा जान नमान्ने, ट्याक्सीको मिटर बिगार्ने र बिग्रेको..
ब्रेक्जिटले १० खर्ब डलर बेलायतबाट बाहिरिने
लन्डन । हालसम्म ब्रेक्जिटको टुंगो लागिसकेको छैन । तर, बेलायतको वित्तीय सेवा उद्योग धरासायी भइसकेको छ । ब्रेक्जिटकै कारण बैक र वित्तीय कम्पनीहरुले १० खर्ब डलरको सम्पत्ति देश बाहिर अर्थात् युरोपेली..
कांग्रेसका माग पुरा : गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको नामका अस्पताल केन्द्र सरकारकै मातहत
काठमाडौं । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका अस्पतालहरुलाई संघीय सरकार मातहतमै राख्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्..
सुन काण्डमा मुछिएका सरकारी कर्मचारी श्रेष्ठविरुद्ध १४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा, परिवार नै प्रतिवादी
काठमाडौं । साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहको अभियोगमा निलम्बित त्रिभुवन विमानस्थलका रेडियो अपरेटर श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ..
काठमाडौं । पारस खड्काको कप्तानी इनिङसँगै नेपालले यूएईविरुद्धको तेस्रो एकदिवसीय म्याच ४ विकेटले जितेको छ । यससँगै तीन म्याचको सिरिज २–१ ले आफ्नो पक्षमा पारेको छ । गत चैतमा एकदिवसीय मान्यता..
अब माननीय: दीपक मनाङेले लिए सांसदको सपथ
काठमाडौं । गण्डकीका प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित राजीव गुरूङ ‘दीपक मनाङे’ ले सपथ लिएका छन्। उनलाई गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सोमबार साँझ सपथ खुवाएका हुन्। सर्वोच्च अदालतबाट जमानतमा थुनामुक्त भएपछि..
अख्तियारको निष्कर्ष १ खर्ब १८ अर्ब बराबरको ठेक्का समस्यामा
काठमाडौँ । राज्यकोषबाट एक खर्ब १८ अर्ब बराबरको लगानी भएका एक हजार ८४८ वटा ठेक्का सम्झौताको कार्य शुरु सम्झौता अवधिभित्र सम्पन्न नभएको पाइएको छ । नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा ठेक्का..
पूर्वयुवराज पारस शाहलाई हृदयघात, नर्भिक अस्पतालमा भर्ना
काठमाडौं । पूर्वयुवराज पारस शाहलाई हृदयघात भएको छ । उनलाई थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालको आकस्मिक उपचार कक्ष (आईसीयू) मा भर्ना गरिएको छ । ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रस्थित शिव पार्वती मन्दिर र हिरण्यवर्ण महाविहारमा..
टिप्परले फेरि मान्छे मार्‍यो, स्थानीयले गरे आधा दर्जन टिप्परमा तोडफोड र आगजनी
विराटनगर । मोरङको सुन्दर हरैंचा नगरपालिका–९ सिसौघारीमा टिप्परको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु भएको छ । सोमवार बिहान विराट चोकबाट विराटनगरतर्फ आउँदै गरेको ना३ख ३३५५ नम्बरको टिप्परले ठक्कर दिँदा सुन्दरहरैचा–९ की ११..
जन्ती चढेको बसमा ११ हजार भोल्टेजको करेन्ट लाग्दा ७ को मृत्यु, ३० घाइते
काठमाडौं । धनुषामा जन्ती चढेको बसमा करेन्ट लाग्दा ७ जनाको ज्यान गएको छ भने ३० जना भन्दा बढी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । शुक्रबार साँझ धनुषाको सबैला नगरपालिका स्थित बाल्टिया..
डा केसीको माग प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि डा गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै अनसन जारी रहने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बैठकले प्रतिपक्षको अवरोधका बाबजुद विधेयक पारित गरेको हो। आफ्नो सम्झौता..
कर्जाको ब्याज घटाउन माग गर्दै पूर्वका व्यवसायीले आन्दोलन गर्ने
विराटनगर । उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह भएको ऋणमा अधिकतम ७ र व्यावसायिक क्षेत्रमा ९ प्रतिशत राख्न माग गर्दै मोरङका व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले शुक्रबार..
संसद्‍मा कांग्रेसको नाराबाजीका बीच पारित भयो चिकित्सा शिक्षा विधेयक
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ । शुक्रवार कांग्रेसको नाराबाजीका बीच विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । कांग्रेसले नाराबाजी गरिरहँदा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि..
भोलि संसदमा मुठभेड पनि हुनसक्छ : गगन थापा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम् पूर्वमन्त्री गगन थापाले सभामुखको भूमिका तटस्थ र सरकार जिम्मेवार नभए भोलि बस्ने संसद बैठकमा मुठभेडपनि हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार..
विश्व बैंकमा नेपालले मत हाल्न सेयर किन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकमा आफ्नो मताधिकार हुनेगरी सेयर किन्ने निर्णय गरेको छ । विश्व बैंकमा आफ्नो मताधिकार नहुँदा आफ्ना कुराहरु राख्न नपाइएको भन्दै सरकारले थप सेयर किनेर मताधिकार सुरक्षित गर्ने..
बाँके भूमिसुधारका खरिदार ५० घुससहित पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालको बाँकेस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा कार्यरत खरिदार संजय कुमार ठाकुरलाई ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ । अख्तियारको नेपालगन्जस्थित कार्यालयबाट गएको टोलीले ठाकुरलाई..
अमेरिकामा “भिडियो गेम”को व्यापार ४४ खर्बको कारोबार
एजेन्सी । “फोर्टनाइट”, “पोकेमोन गो” समेतका लोकप्रिय “भिडियो गेम” उद्योगबाट संयुक्तराज्य अमेरिकामा सन् २०१८ मा करिब ४४ अर्ब अमेरिकी डलरको कारोबार भएको छ । यो कारोबार हालका वर्षहरुकै सबैभन्दा उच्च..
चन्द्रागिरीमा हिउँ पर्यो
काठमाडौं । काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा हिउँ परेको छ । हिउँ परेसँगै सँगै मानिसहरु चन्द्रागिरी पुग्न थालेका छन् । चन्द्रागिरी पुगेकाहरु हिउँ खेलेर रमाइलो गरिरहेका छन् । हिउँ परेपछि चन्द्रागिरी केबलकार चढ्न जानेहरुको..
बिस्कुट, चाउचाउको खोल सडकमा फाल्नेलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं । प्रयोगपछि बिस्कुट, चाउचाउ, चक्लेट, गुट्खा, चुरोटको खोल लगायतका फोहोर सडकमा फाल्ने बानी छ ? छ भने त्यस्तो बानीलाई तुरुन्त त्यसलाई सुधार्नुस् । काठमाडौं महानगरपालिकाले यसरी सडकमा फोहोर फाल्ने..
काठमाडौं । श्रीमतीसँग डिभोर्सलगत्तै सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले नयाँ घर बसाएका छन् । उनले चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलसँग ‘कोर्ट म्यारिज’ गरेका हुन् । रवि र निकिता केही महिनादेखि प्रेममा थिए..
एजेन्सी । विश्वका शीर्ष २६ धनी मानिससँग विश्वको आधा जनसंख्याको हिस्सा बराबर सम्पत्ति रहेको बताउँदा धेरैलाई पत्याएर नलाग्न सक्छ । तर, सोमबार ब्रिटिस च्यारिटी संस्था अक्सफामले जारी गरेको एक रिपोर्टमा उक्त..
काठमाडौं । पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म १ महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत आजदेखि सुरु भएको छ । पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना स्वस्थानी व्रत र माघ..
काठमाडौं । नापी विभागले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा नेपालको गलत नक्सा प्रकाशन तथा प्रशारण हुने क्रम नरोकिएको भन्दै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी कुनैपनि सञ्चारमाध्यमले नेपालको नक्सा..
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सुरक्षाका लागि २१ हजार ४४१ स्थानमा सिसी क्यामरा जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले भर्खरै गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौँको नौ हजार ११७, भक्तपुर पाँच..
बुटवल । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममा अर्यालले भूमि व्यवस्थापनका लागि शक्तिशाली आयोग गठनको तयारी भइरहेको बताएकी छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी विकास..
चीन–अमेरिका व्यापार वार्ता : अमेरिकाले भन्यो ‘ब्रेक थ्रु भएको छैन’
न्यूयोर्क। चीन–अमेरिका व्यापार युद्धलाई शान्त पार्ने प्रयासस्वरूप भएका वार्तापछि देखिएको सुधारको सङ्केतसँगै विश्वको शेयर बजारमा शुक्रबार वृद्धि देखिएको छ । अमेरिकी वाल स्ट्रिट जोर्नलले वासिङ्टनले चीनमाथिको थप करवृद्धिलाई हटाउने बताएपछि यूरोपेली..
साढे ३३ किलो सुन काण्डमा न्यायाधीशमाथि पनि ‘कारबाही’
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको आदेशमा उच्च अदालत विराटनगरका ५ जना न्यायाधीशलाई न्याय परिषद सचिवालयमा तानिएको छ । तस्करीको साढे ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको संगठित अपराध,..
स्वीस बैंकमा नेपालीले लुकाएर राखे ५२ अर्ब रुपैयाँ क–कस्को हो ?
बानेश्वर गंगादेवी टोल ठेगाना उल्लेख गर्ने मिनु शाह छिब्बर परिवारको मात्रै स्विस बैंकमा २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ जम्मा छ । यहाँका बैंकमा सबैभन्दा धेरै रकम जम्मा गर्ने नेपालीमा पर्छिन्..
५५ नेपालीको विदेशमा अवैधानिक धन्दामा Nepaleaks-2019 को खुलासा, कुन व्यवसायीको कति धन अवैधानिक
काठमाडौं । खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) को टीमले खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्टस्’ (आईसीआईजे) सँगको सहकार्यमा एक वर्ष लगाएर गरेको खोजको खुलासा हो– नेपाललिक्स २०१९। यो..
Results 1994: You are at page 17 of 67